Det var bara ọtụtụ ndị na-ede blọgụ ji sị "ego dị na ndepụta."
W nwere ike iche na mgbasa ozi ọha na eze bụ ụzọ dị mma iji mee ka ndị ọbịa gị nwere mmasị. Ma mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ojiji ya, mana ọ bụrụ na ị na-ewuli ndị na-ege gị ntị na-eguzosi ike n’ihe ma na-echekwa blogg gị, ọ pụghị ịkatọ e-post.
Skicka e-post till ike ịbụ nkà na ụzụ oge ochie tụnyere mgbasa ozi ọha mmadụ, mana ọ ka mma karịa na ị natara ozi gị. N’elu mgbasa ozi mgbasa ozi, ozi dị iche iche na-akụkarịkwa ụda. N’aka nke ọzọ, e-post na-anọ n’ime igbe mbata nke ndị na-ege gị ntị, ọ gaghị apụkwa ma ọ bụrụ na eleghara ya anya.
Na webbplats na e-post, ị gaghị enwe ihe gbasara njide agwa, oyiyi nkọwa, ụgwọ ruru, ma ọ bụ okwu mkparị.
Ọ bụ ya bara ego ji dị na listi ahụ. Nke a bụ otu esi nweta ndepụta gị na-arụ ọrụ maka gị.
1 Kedu esi esi mepụta listi e-post gị?
1.1 1 – ịdị Nwepụ E-post
Kedu esi esi mepụta listi e-post gị?
N’ụzọ doro anya, iji mee ego ọ bụla site na e-post gị autoresponder, ị ga-ebu ụzọ nweta ndị debanyere aha.
1 – ịdị Nwepụ E-post
Ọ bụrụ na ịchọta ndị debanyere aha e-post via ihe mgbaru ọsọ bụ isi nke blogg, ịkwesịrị ime ka ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị dị na ya. Ụdị nhọrọ gị ga-esi na ọdịnaya gị pụta. Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị jupụtara, ọ dịghị onye ga-ahụ ụdị nhọrọ gị. Kọwaa ihe ndọpụ uche na-enweghị isi ma jide n’aka na ụdị ntinye gị dị anya.
Chee echiche iji otu onye na-enweghị iwe, enyi-enyi na-emepụta ụdị iji nweta ọbụna ndị ọzọ ndị debanyere aha. N’ebe a na WHSR, anyị na-eji Ninja Popups. W Nwere ike zụta Ninja Popups na CodeCanyon. Anyị na-akwado OptinMonster, en WordPress-version som är bakom ikemepịta mara mma ọpụpụ na ụdị ụdị.
Usoro a na-ewu ewu iji nweta ndị ọzọ debanyere aha e-post på webbplatsen n’inye ya freebie, dịka akwụkwọ e-akwụkwọ ma ọ bụ ozi e-post, nya ndị debanyere aha ọhụrụ.
Mgbe ị na-enye freebies chọrọ ego ihu oge n’ihu, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na-achọpụta na ọ na-enyere aka ịgbakwụnye mmelite e-post ha.
Pat Flynn nke Smart Passiv inkomst na-enweta nnukwu ego nke ego ya site n’ịkwalite Bluehost na LeadPages.
Iji chebaa e-post gị autoresponder, ị ga-achọ ihe ị ga-ere.
Njikọ njikọta bụ ụzọ en na-ewu ewu iji jiri ego na-emepụta ndị na-emepụta e-post. Ị nwere ike iji weebụsaịtị dị ka Na-ere ahịa ịchọta njikọ mmekọ mmekọ, ma ọ bụ soro ya na ụdị ndị ị na-eji ndị nwere mmemme mmemme, dị ka gị ụlọ ọrụ weebụ.
Jag nwekwara ike inweta ego webbplats n’inweta ngwaahịa na ọrụ gị. Ngwaahịa dị iche iche, dị ka ọmụmụ na ebook, bụ ụzọ nkịtị iji nweta ego na-enweghị ego. Ọ bụ ezie na ha chọrọ oge iji nweta ego iji mepụta ngwaahịa ahụ, ha nwere ike ịnọgide na-enweta ego ị na-enweta ngwa ngwa ma ọ bụrụ na gị onwe gị zuru ezu, n’enwegịr GI.
Otú ọ dị, ị ga-ahapụ ụzọ meghere maka ahịa na e-post ọ bụla. Ọbụna ozi ịntanetị gị nwere ike ijikọta na saịtị gị, ebe ndị ọbịa nwere ike ịchọta njikọ ịzụta ngwaahịa gị ma ọ bụ pịa njikọ njikọ gị.
Na ozi ịmalite gị, ị ga-ewulite ntụkwasị obi na ndị na-ege gị ntị. Ọ bụrụ na ị na-amalit ma ndepụta gị ka dị obere, atụla ụjọ ịkpọ ndị debanyere aha ịzaghachi na kpọtụrụ gị ozugbo.
Maka ihe kachasị ego, nya ọtụtụ ngwaahịa na ọrụ na ọnụahịa ihe dị iche iche na usoro gị niile. Naanị n’ihi na e-post gị nke na-ere i $ 500 adịghị arụ ọrụ, nke ahụ apụtaghị na ị ga-ada mbà na ndị ahụ debanyere aha. Gbalịa ịgbasa usoro ntanetị gị iji nya otu obere ihe $ 50.
N’etiti ndị ọbịa ndị ọzọ e-post ahịa ngwá ọrụ, Nọgide na-emechi bụ aha na-abịa mgbe niile (ọ dịghị iwu ọ bụla). E wezụga ọrụ ya n’ahịa ahịa, saịtị ahụ agbasawokwa iji tinye ọrụ ndị metụtara ahịa ahịa ndị ọzọ. Lelee Nlele kọntaktị Tim si na mgbe niile chọpụta ihe.
GetResponse bụ ngwá ọrụ ahịa ahịa anyị a akwadoro na nnukwu elekwasị anya na ndị na-emepụta ihe. Ha anọwo gburugburu karịa afọ 15. Anyị na-eji ya ịmepụta, zipụ, ma soro akwụkwọ akụkọ e-post na ndị debanyere aha anyị na ọnụahịa dị ọnụ. Lelee Ntụleghachi nke Jerry GetResponse chọpụta ihe.
AWeber bụ ihe na-ewu ewu na listi e-post nke na-agụnye njirimara na-arụ ọrụ. Ha na-enyekwa ngwá ọrụ e-post na-e-post ka ndị na-debanyere aha gị nwere ike ịnweta ozi ntanetị ọhụrụ gị, na-eme ka akwụkwọ akụkọ gị kpamkpam.
MailChimp bụ akwụkwọ ozi e-post na-ewu ewu bụ ndị a ma ama maka ịdị mfe nke ojiji na ezigbo ndebiri (ọ bụghị ịkọ abụ mara mma ha maskot). MailChimp na-enye ngwá ọrụ na-arụ ọrụ na akaụntụ ha akwụ ụgwọ naanị. Webbplats na ngwa ngwaọrụ ha, ị nwere ike ịmepụta ọtụtụ ozi anntanetị maka ndị debanyere aha ọhụrụ, ma ọ bụ ọbụna tinye ozi ịntanetị ka a zitere mgbe ihe ụfọdụ mụwa mg mgụ mgụụụụụụụ.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịde blọgụ ego, ọ dị oké mkpa iji wuo listi e-post.
Ozi ọma ahụ bụ, ọ dịtụbeghị oge! Bido-webbplatsen ịbanye maka ntinye akwụkwọ nhọrọ e-post gị, na ịdebe ụfọdụ nwepu aha na ebe nrụọrụ weebụ gị. Ozugbo i nwere echiche nke ihe ndị na-ege gị ntị chọrọ, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ha ga-ahụ n’anya.
Ọ bụ ezie na ndị na-emepụta ego na-ewepụta ego na-ewepụta oge iji guzobe, ozugbo ha nọ n’ọnọdụ, ha nwere ike ịbụ ezigbo ego na-enweta ego maka ndị na-ede blọgụ na azịma.